विवाहका पुजारीले दुलाहाकै अगाडि दुलहीसँग यौ; न स; म्बन्ध राखेपछि…. - Emechi.com
इमेची डटकम बिहिबार, भदौ १७, २०७८ प्रतिक्रिया दिनुहोस्
पुजारीले स; म्बन्ध राखेका थिए । उनलाई २५ वर्षपछि जे; ल स; जायँ भएको छ ।
घटना महाराष्ट्रको मालेगाउँको हो । टाइम्स अफ इण्डियाका अनुसार विहे भएको दुई-तीनपछि दुलही विरामी भइन् । परिवारजनले उनलाई आफूलाई तान्त्रिक समेत बनाउने विवाहका पुजारी कहाँ लगे ।
तान्त्रिकले दुलहीको श; रीरमा रहेको भू; त प्रे; त ठिक गर्ने बहानामा उनलाई आफ्नो कोठामा लगे । त्यसपछि उनले दुलहीलाई क; पडा खोल्न लगाए । केहीबेर झारफुक गरेर जबरजस्ती स; म्बन्ध राखे । त्यो बेला पीडित महिला निकै चिच्याइरहेकी थिईन् ।
अचम्मको कुरा त के छ भने जून कोठामा दुलहीसँग ता; न्त्रिकले स; म्पर्क गरिरहेका थिए त्यो बेला पीडितका श्रीमान र सासु त्यही कोठाबाहिर उभिरहेका थिए । दुलही चिच्याउँदा पनि उनीहरु झारफुक गरिरहेको ठानेर बाहिरै बसिरहे ।
तान्त्रिकको उपचारले निको नभएपछि उनलाई अस्पताल लगियो जहाँ ता; न्त्रिकले ब; ला. तm. र भएको कुरा परिवारले थाहा पाए । आरोपी तान्त्रिकको उमेर अहिले ५५ वर्ष पुग्यो, आज भन्दा २५ वर्ष पहिले नवविवाहितको न शो; षण गरेको अभियोगमा स्थानीय अ; दालतले सात वर्षको जे; ल सजायँ सुनाएको थियो । यो सजायँमा तान्त्रिकले एक महिना मात्रै जेलमा बसे । त्यसपछि जमानतमा रिहा भए ।
आरोपी तान्त्रिकको नाम शान्ताराम जेंडे हो । उनीविरुद्ध फैसला गर्दै अहिले बाम्बे हाईकोर्टले जिल्ला अ; दालतलाई पीडकलाई अ; दालतमा उपस्थित गराएर स; जायँ पुरा गराउन आदेश दिएको छ ।
स्थानीय अदालतले तान्त्रिकलाई जमानतमा छाडेपछि पीडित परिवारले हा; ईकोर्टमा मु; द्दा हालेको थियो । जहाँ पुजारीले पनि सजायँ माफ गरिदिन विन्ति गरेका थिए तर, अदालतले उनको विन्ति खारेज गरिदिएको छ । २५ वर्षपछि अब पुजारीले ६ वर्ष ११ महिना जे; ल बस्नुपर्ने भएको छ ।
काठमाडौंमा फेरि सुरु भयो वर्षा